Arthik Page – Pursuit of Prosperityस्वस्थ जीवनका पाँच आधार - Arthik Page - Pursuit of Prosperity
स्वस्थ जीवनका पाँच आधार
२०७८ कार्तिक १८ गते बिहीबार, १०:५९ मा प्रकाशित
हरेक व्यक्ति स्वस्थ, समृद्ध र सुखी रहन चाहन्छ । रोग लागोस्, दुःख पाइयोस्, गरिब भइयोस् भन्ने कसैको पनि चाहना हुँदैन । तर त्यसका लागि आधार निर्माण गरेका छौं त ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
स्वस्थ, सुखी र समृद्ध बन्न हाम्रो पूर्वतयारी के छ ? यसतर्फ हाम्रो ध्यान गएको पाइँदैन । अर्थात हामी आधार नै निर्माण नगरी राम्रो स्वास्थ्य, सुख र समृद्धिको कामना गर्दछौं । जसले हामीलाई अझ दुःखी र पीडित बनाइरहेको छ ।
जीवनको सबैभन्दा ठूलो धन भनेको स्वास्थ्य हो । स्वास्थ्य ठीक छ भने सबै कुरा ठीक हुँदै आउँछ । भनिन्छ ‘स्वस्थ मान्छेले नै स्वस्थ सिर्जना गर्न सक्छ ।’ स्वस्थ सिर्जना नै सुख र समृद्धिको आधार हो । त्यसैले स्वस्थ रहनु सबैभन्दा पहिले आवश्यक छ ।
तत्काल स्वस्थ रहन वा दीर्घायु प्राप्त गर्न वा स्वस्थ जीवन जिउन केही आधार तयार गर्नुपर्दछ । बिहानीले दिनको लक्षण दिन्छ भने झैं हामी जीवनभर स्वस्थ रहन सुरुवातदेखि तयारी गर्नुपर्दछ । सुरुदेखि नै स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन जरुरी छ । स्वस्थ जीवनका लागि संयमित जीवनशैली, उचित आहार–विहार, योगासन, ध्यान र प्राणायम यी पाँच आधारलाई अबलम्बन गर्नुपर्दछ ।
गलत वा खराब जीवनशैलीका कारण नै हामी रोगी, दुःखी र गरिब भइरहेका छौं । तनाव, रिस, राग, द्वैषपूर्ण व्यवहार खराब जीवनशैलीका द्योतक हुन् । त्यसैले संयमित बन्ने, असल व्यवहार गर्ने, रिस, राग, द्वैषबाट टाढै रहने नै संयमित जीवनशैली हो । यसले नै मानिसलाई स्वस्थ बनाउँछ ।
गरिब मुलुकका आम नागरिकको समस्या भनेको खानपानमा अनियमितता हो । समाज, संस्कार र व्यवहारले पनि हामीलाई अनियमित खानपान गराउँछ । गरिब हुनुको कारणले पनि भेटेको बेला पाएजति खाने र नभेटेको बेला भोकै बस्ने बाध्यता छ । यस्तो खानपानले पनि हामीलाई अस्वस्थ बनाइरहेको छ । त्यसैले खानपान वा आहार–विहारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । जसका लागि उचित समयमा खाने, ठिक्क मात्रामा खाने, आफ्नो शरीरलाई चाहिने र धान्ने मात्रामा मात्रै खाने गर्दा शरीर स्वस्थ बन्दछ । यसैगरी स्वच्छ हावा भएको, शान्त र सुन्दर ठाउँमा घुम्न वा विहार गर्न पनि आवश्यक छ ।
योगासनलाई शारीरिक व्यायाम पनि भनिन्छ । विभिन्न आसनमार्फत शरीरका अंगहरुलाई ऊर्जाशील र क्रियाशील बनाउन आवश्यक छ । योगले शारीरिक, मानसिक रुपमा स्वस्थ रहन मद्दत पुर्याउँछ भने नसर्ने रोगहरुबाट बचाउँछ । यसले स्वस्थकर दीर्घजीवन प्रदान गर्ने वैज्ञानिक आधारहरु भएकोले नियमित योगअभ्यास गर्नु आवश्यक छ ।
ध्यान भनेको शान्त वा विचारशून्य भएर बस्ने वा कुनै एक विषयमा केन्द्रित भएर बस्ने भनेर बुझिन्छ । यसले शारीरिक तथा मानसिक थकान, तनाव तथा डिप्रेसन कम गर्न सहयोग गर्छ । यसैगरी अनिद्रा हटाउने, मानसिक एकाग्रता कायम गरी दिमाग तीक्ष्ण बनाउने, सकारात्मक सोचको विकास गराउने गर्दछ । त्यसैले हामीले हरेक दिन, हरेक समय वा हरेक ठाउँमा ध्यान गर्न सक्छौं ।
प्राणायम भनेको श्वासप्रश्वाससँग सम्बन्धित अभ्यासहरु हुन् । श्वासप्रश्वासको समस्याबाट नै धेरै रोगहरु लाग्ने भएकोले प्राणायमको माध्यमबाट रोक्न वा निर्मुल गर्न सकिन्छ । प्राणायामका विभिन्न प्रकार छन् ती प्रकारहरु विज्ञ वा जानकारबाट ग्रहण गरी हामीले अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसले मानसिक रुपमा स्थिरता कायम गर्ने, रक्तसञ्चार वा पाचन प्रणालीलाई सशक्त बनाउने, शारीरिक तौल घटाउने तथा मानसिक तनाव घटाउने र हामीलाई स्वस्थ बनाउने काम गर्दछ ।
यी पाँच आधारहरु व्यक्ति स्वयम्ले निःशुल्क वा न्यून शुल्कमा अवलम्बन गर्न सक्दछ । त्यसैले स्वस्थ रहने उपाय आफैसँग छ भन्ने कुरालाई मनन् गरी प्रत्येक व्यक्तिले संयमित जीवनशैली, उचित आहार–विहार, योगासन, ध्यान, प्राणायम आदिको अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सामान्य स्वास्थ्यका नियमहरुलाई व्यवहारमा उतार्न सके स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन तथा पुनःस्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ । स्वस्थ जीवनशैलीको माध्यमबाट आरोग्य, आत्मविश्वास र वौद्धिक मनोबल वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
आयुर्वेद नेपालको मौलिक चिकित्सा पद्धति हो । जीवनशैलीको उचित व्यवस्थापन र जडीबुटीको उचित प्रयोगबाट नै हाम्रो स्वास्थ्य रक्षा गर्ने कार्य आयुर्वेद विज्ञानले गर्दै आएको छ । आयुर्वेद विज्ञानका प्रवर्तक धन्वन्तरीले पनि स्वस्थ जीवनशैली र जडीबुटीको योग गराएका थिए । त्यसैले उनलाई आयुर्वेद विज्ञानका प्रवर्तक, गुरु वा देवताको रुपमा पूजिँदै आएको छ ।
वर्तमान अवस्थामा बढ्दै गइरहेको अस्वस्थ्य जीवनशैलीसँग सम्बन्धित नसर्ने प्रकृतिका रोगहरुको रोकथामका लागि यो विधाको अहम् भूमिका रहिआएको छ । स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ समाज, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ उत्पादन र स्वस्थ उपभोगको अवधारणालाई दैनिक जीवनमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवनप्रणाली प्रवर्द्धनका साथै प्रतिरोधात्मक विधि अवलम्बन गरी रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न सकेमा विभिन्न समयक्रममा देखापर्ने महामारीजन्य रोगलाई निर्मुल पार्न सकिने चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
स्वस्थ जीवनशैली, दिनचर्या, ऋतुचर्या, स्वस्थ एवम् सन्तुलित आहार, योग, ध्यान, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने बहुउपयोगी जडीबुटीहरु र तिनको सदुपयोग आदिको जानकारी प्रत्येक नागरिकलाई पुर्याउन विभाग सक्रिय छ । यही उद्देश्यले विभागले संघीय ससर्त अनुदानबाट प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत देशैभरि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिकका लागि स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम, मातृ–शिशु सुरक्षार्थ औषधि वितरण, नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र स्थापना लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यी कार्यक्रमहरुसँग जोडिएर पनि हामीले लाभ लिन सक्छौं । राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल लिनु हामी सबैको अधिकार पनि हो । त्यसैले स्वस्थ जीवनशैलीको अबलम्बन गरौं, आयुर्वेदको उचित प्रयोग गरौं, जडिबुटीको सदुपयोग गरौं, स्वस्थ रहौं, दीर्घजीवी बनौं, जय आयुर्वेद, जय धन्वन्तरि ।